Konkolaattotni haarawni balfama dizzelii eeguuf teekinooloojiiwwan ni qabu. Balfamni gubama dizzelii nama hunda ni miidha – keessattuu namoota daandiiwwan gurguddoo cinaa jiraatan, hojjetan akkasumas mana barnootaa deeman. Balfamni konkolaattota dizzelii dulloomoo irraa dhufu rakkoo fayyaa hamaa kan akka dhukkuba asmii, dhukkuba onnee, kaanserii fi midhaa qaamaa waliin dhalachuu fiduu ni danda’a.
Barnootni viidiyoo kun akkaataa ati itti konkolaataa clean diesel kee kunuunsitu, akkaataa suphaawwan qaalii itti ittistu, akkasumas akkaataa boba’aa irratti qarshii itti qusattu sitti agarsiisa. Barnootichi viidiyoowwan toorbatti kan qoodamedha.
Sagantaan Nagahee (Voucher) Qulqulleessuu DPF cufameera. Nagaheewwan Qulqulleessuu DPF kana booda hin argaman.
Gaaffiwwan yoo qabaatte maaloo 206-689-4057 bilbili yookiin bethc@pscleanair.org ‘tti imeelii ergi.